‘सामाजिक कुरीति विरोधी कार्यक्रम र महिला सशक्तीकरण मेरा एजेन्डा हुन’
आज तीन बजे प्रदेश १ मा जार जना राज्यमन्त्री थपिए । थपिनेहरूमा एक्ली महिला अनुहार थिइन जसमाया गजमेर विश्वकर्मा । सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भएकी झापाकी समानुपातिक सांसद प्रदेश १ को मन्त्रीपरिषदकि एक्ली महिला हुन । मुख्यमन्त्री सहित पाँच मन्त्री र चार राज्यमन्त्रीमा विश्वकर्मा एक्ली महिला अनुहार हुन । उनै मन्त्री विश्वकर्मासँग प्रदेशपोर्टलकर्मि विराट अनुपमले टेलिफोन कुराकानी गरेका छन् ।
प्रदेश १ को मन्त्रिमण्डलमा चयन हुने एक्लो महिला हुनु भएकोमा बधाई छ ।
धेरै धन्यवाद ।
मन्त्री बन्दैछु भन्ने पहिलो जानकारी कसरी पाउनु भयो?
हुन त २०७४ फागुन ३ मा प्रदेश १ को मन्त्रीपरिषद् गठन हुँदै मेरो हल्ला चलेको थियो । हल्ला हल्लामै सीमित भयो । विगत दुई महिना अगाडि पनि मेरो पनि मन्त्री बन्नेको लिस्टमा नाम छ भन्ने कुरा आयो । मलाइ पत्यार लागेको थिएन । आज बिहान ११ बजेपछि मुख्यमन्त्रीले शपथको लागी तयार हुनु भनेपछि मात्रै म मन्त्री बन्दै छु भन्ने निश्चित भयो ।
एक प्रदेश सांसद भएर घर आउनु र राज्यमन्त्री बनेर आउनुमा के फरक हुँदो रहेछ?
केही फरक हुदोरहेछ । आज धेरै बधाई तथा शुभकामनाहरू आए । तर, दैनिकीमा भने फरक भएन । शपथग्रहण सकेर म बिर्तामोड आफ्नो घर सम्म पहिलेकै जसरी आएँ । आज भने घरमा झापा बैगुनधुराबाट आमाबुबा आउनु भएको छ । ६३ वर्षीय आमा हर्कमाया र ६९ वर्षीय बुबा केन्द्रलालसँगै आज हामी घरमा छौँ । अहिले पनि बेलाबेला बधाई र शुभकामना आइरहेको छ । त्यो भन्दा अरू धेरै फरक छैन ।
तपाँइको राजनीतिक यात्रा कसरी र कहिलेबाट सुरु भयो?
म २०३४ असार १९ गते इलाम जिल्लाको हाल फाकफोकथुम गाउँपालिकामा पर्ने साबिक लुङ्दे गाउँमा जन्मिए । मेरो परिवार सामान्य परिवार हो । समाजमा केही जातीय विभेदहरूको महसुस गरेर पीडा हुन्थ्यो । यसै क्रममा म २०४६ सालपछि एमालेसँग राजनीतिक रूपमा जोडिए । पछि २०५३ मा इलामको महेन्द्ररत्न बहुमुखी क्याम्पसमा आइएड भर्ना भएपछि भने म विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए । स्ववियु सदस्य भए । पछि विवाह गरेर झापा आए । झापामा पनि राजनीतिक रूपमा सक्रिय भए । झापाको क्षेत्र नम्बर २ को क्षेत्रीय कमिटी, दुई कार्यकाल जिल्ला कमिटी हुँदै प्रदेश कमिटी सदस्य सम्म भए । तत्कालीन एमालेमा हुँदा प्रदेश कमिटी सदस्य थिए । एकीकरणपछि पनि नेकपा प्रदेश १ कमिटी सदस्य नै छु । म पार्टीको राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद् सदस्य पनि हुने मौका पाए । २०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा झापाबाट समानुपातिक सांसदको टिकट पनि पाएँ । तर, पार्टीले चुनाव हारेकाले म संविधानसभा सदस्य भने हुन पाइन ।
तपाँइलाइ विवाहपछि परिवारमा रहेर राजनीति गर्न कत्तिको गाह्रो सजिलो भयो?
मलाइ गाह्रो भएन । मेरो श्रीमान् मोहन विश्वकर्मा आफै २०३७ साल देखी नै भूमिगत कालदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । २०५७ मङ्सिर २७ मा हाम्रो पार्टी लाइनमै विवाह भयो । विवाहपछि बरु मेरो श्रीमानको राजनीतिमा केही असहज भयो । मलाइ धेरै सहयोग भयो । मेरो आमा पनि २०५४ ताका गाउँ कमिटी सदस्य हुनुन्थ्यो । त्यसले पनि मलाइ राजनीति गर्न कुनै तनाव भएन परिवारको तर्फबाट । तर, ३ दिदी बहिनी र २ दाजु भाइको मेरो परिवारमा राजनीतिमा ज्यादा सक्रिय भने म नै भए ।
तपाँइलाइ पहिलोपटक राजनीतिमा झुकाव राख्दा एक दिन मन्त्री हुन्छु भन्ने सपना थियो?
थिएन । म मन्त्री बन्न भन्दा पनि सामाजिक विभेदका विरुद्ध राजनीतिमा सक्रिय भएको थिए । मन्त्री हुने मेरो सपना थिएन । समय क्रमले राज्यमन्त्री बनायो ।
प्रदेश १ को सामाजिक विकास राज्यमन्त्री भएपछि तपाँइका प्राथामिकताहरु के के हुन?
सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीले गर्नुपर्ने सबै जिम्मेवारी त पुरा गर्नैपर्छ । त्यसमा पनि मेरो खास ध्यान चाहिँ महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणमा हुनेछ । महिलाले आर्थिक रूपमा बलियो भएपछि मात्रै हिंसा भोग्नु पर्दैन । महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणसँगै सामाजिक कुरीति विरुद्ध पनि मेरो ध्यान हुनेछ । सामाजिक कुरीति विरोधी कार्यक्रम र महिला सशक्तीकरण मेरा एजेन्डा हुन ।